▷ Laptọọpụ Lenovo kacha mma nke 2022, nke ị ga-azụta? Echiche
Lenovo bụ ụlọ ọrụ China na-eto eto nke ọpụrụiche ya bụ ngwaọrụ eletrọnịkị. Afọ iri abụọ ka amụrụ ya, ọ nwetara ngalaba kọmputa nke IBM, ebe ọ malitekwara ire kọmputa akwụkwọ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke ịzụrụ a Laptọọpụ Lenovo.
1 Ntụnyere akwụkwọ ndetu Lenovo
2 Kedu laptọọpụ Lenovo kacha mma?
2.3 Legodo Lenovo 5
3 Laptọọpụ Lenovo ọ dị mma?
4 Ụdị laptọọpụ Lenovo
4.1 echiche pad
4.3 ndi luru agha
4.4 Chee echiche nso
5 Laptọọpụ Lenovo site na processor
5.1 Core i3 ma ọ bụ Ryzen 3
5.2 Core i5 ma ọ bụ Ryzen 5
5.3 Core i7 ma ọ bụ Ryzen 7
6 Ajuju ajuju ajuju
6.1 Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ Lenovo agaghị agbanye
6.2 Otu esi emeghe tray CD nke laptọọpụ Lenovo
6.3 Otu esi eme ka òké aka na laptọọpụ Lenovo
7 Laptọọpụ Lenovo, echiche m
8 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Lenovo dị ọnụ ala
8.2 Ụlọikpe Bekee
Ntụnyere akwụkwọ ndetu Lenovo
Iji nyere gị aka ịhọrọ laptọọpụ gị n'ọdịnihu, nke a bụ nhọrọ nke ụdị laptọọpụ Lenovo kacha mma. Kedu nke ị na-ahọrọ?
Kedu laptọọpụ Lenovo kacha mma?
Lenovo Ideapad 3 bụ a kọmputa maka nkezi ọrụ. Ọ nwere ihuenyo inch 14, nha nke a na-enwe ekele mgbe ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-eri ọdịnaya multimedia, yana ihe ndị ọzọ na mkpebi ya 1920 × 1080, ya bụ, Full HD.
Banyere arụmọrụ ya, ọ nwere ihe ndị na-ajụ ase nke ga-eme ka anyị nwee ike ịkwaga na mgbaze, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhazi ya na isi ihe nke Intel (isi i3) ma ọ bụ elu (isi i7). Ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ Ryzen, e nwekwara.
Ya 8GB na 5th ọgbọ Intel Core iXNUMX processor karịrị ezuru maka nkesa Linux ọ bụla dị fechaa, ọ bụ ezie na ọ ga-arụkwa ọrụ nke ọma na Windows 10, nke bụ usoro na-abịa na mbụ arụnyere dị ka ọkọlọtọ. Ọ na-enyekwara draịvụ ike SSD ya aka, 512GB na nke a, nke na-enye ọsọ ọsọ ọgụgụ / ide data dị elu.
Nke a bụ kọmpụta nwere ezigbo ihuenyo nha yana ihe ndị na-ajụ ase maka ọnụ ala dị ala.
Lenovo V14 - Kọmputa ...
Lenovo V14 bụ kọmpụta maka ndị chọrọ nnukwu laptọọpụ na-etinyeghị nnukwu ego. Ya ihuenyo bụ 14 ″, nke na-abịa mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kọmpụta kọmpat maka njem ya. Mkpebi ahụ bụ 1280 × 720, nke dị mma maka ikiri ụdị vidiyo niile ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka ide akụkọ.
Maka ihe ọ bụla ọzọ, anyị na-eche ihu laptọọpụ bụ isi na nhazi ya kachasị mfe, mana ihe mgbaze na nhazi Ryzen ya ma ọ bụ ya na Intel Core i5, 8GB nke RAM nke ga-enye anyị ohere ịnweta ngwa ole na ole meghere n'azụ na, nke a dị mkpa karị. maka ọsọ ha na-enye, draịvụ ike 256GB SSD.
Sistemu eji arụ ọrụ gụnyere na akwụkwọ ndetu Lenovo nke ọkwa a bụ Windows 10.
Legodo Lenovo 5
Lenovo Legion 5 bụ otu n'ime kọmpụta Lenovo bara uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị dị njikere ịkwụ ụgwọ ihe ọzọ. Ọ bụ kọmpụta ha na-ere dị ka "Ịgba chaa chaa", ya bụ, maka egwuregwu vidiyo, nke na-asụgharị n'ime ihe ndị dị ike karị.
N'ihe gbasara arụmọrụ, anyị nwere a Intel Core i7 ma ọ bụ AMD Ryzen 7 nke iji mepee ngwa ga-abụ ọrụ nke ihe dị ka ụzọ iri nke sekọnd. 8GB nke RAM ga-enye anyị ohere ọ bụghị naanị ịkwaga egwuregwu ndị na-achọsi ike, mana ọbụna na-agba ọsọ igwe mebere na-enweghị otu ahụ na-ata ahụhụ nke ukwuu. N'aka nke ọzọ, ọ gụnyere ngwakọ draịvụ ike nwere 512GB na SSD nke anyị nwere ike itinye ọtụtụ egwuregwu dị arọ.
A na-emecha uru nke kọmpụta a dị ukwuu na ihuenyo 14 ″ Full HD nwere mkpebi 1920 × 1080 yana kaadị eserese NVIDIA GeForce RTX3060-4GB GDDR6 nke anyị ga-eji anụ ụtọ egwuregwu niile.
Sistemụ arụmọrụ gụnyere na laptọọpụ Lenovo a bụ Windows 10.
Lenovo Yoga 920 bụ kọmputa nwere ihuenyo mmetụ na-akpali nnọọ mmasị. Otu n'ime ọrụ ya pụtara ìhè bụ mgbanwe ya: ọ na-emepe nke ukwuu na anyị nwere ike iji keyboard nkwado na-akwado ya ka a kụrụ dị ka mbadamba nkume.
Maka ihe ọ bụla ọzọ, anyị bụ ndị mbụ kọmpụta dị ọkara N'ihe gbasara nkọwapụta, yana ihuenyo 13,9 ″ UHD nwere mkpebi nke 3840 × 2160. Intel Core i5 ma ọ bụ i7 processor, 8GB DDR4 RAM na draịvụ ike SSD ya, 512GB na nke a, ga-enye anyị ohere ịkwaga ihe niile dịka a tụrụ anya na kọmpụta nwere njirimara ndị a.
Sistemụ arụmọrụ bụ a Windows 10 nke anyị ga-eji ohere mmetụ aka nke kọmpụta a mee ihe. Ma ọ bụ na ụdị sistemụ arụmọrụ desktọpụ Microsoft kachasị ọhụrụ dabara na ihuenyo mmetụ, nke na-enye anyị ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji stylus dakọtara.
Laptọọpụ Lenovo ọ dị mma?
Dị ka ọ dị na ọtụtụ ụdị, Ọ ga-adabere n'ihe anyị chọrọ imefu. Ọ bụrụ na ajụjụ ahụ akọwapụtara nke ọma ma jụọ ma Lenovo na-eme ezigbo kọmpụta, azịza ya ga-edo anya karịa "ee." Enwere ike inwe obi abụọ banyere ịdị mma nke laptọọpụ ha, mana anyị ga-enwe obi abụọ ndị ahụ ma ọ bụrụ na anyị azụta akụrụngwa dị ọnụ ala nke ha wepụrụ ogo na nkọwapụta. Ma na Lenovo nwere kọmpụta ihuenyo 15'6 ″ maka ọnụ ahịa okpukpu atọ erughị nke ụdị ndị ọzọ.
Lenovo bụ akara nke ahụ na-enye laptọọpụ na ọnụ ahịa dị mmaYa mere, ọ bụrụ na anyị chịkọtara site n'ikwu na ụlọ ọrụ China na-emepụta ngwá ọrụ "dị ọnụ ala" na "adịghị mma", anyị ga-eme nnukwu ndudue. Ọ bụrụ na anyị dị njikere imefu ntakịrị karịa, anyị nwere ike ịhụ na laptọọpụ adịghị mma, mana ọ dị mma na ọnụ ala dị ala karịa ihe ụdị ndị ọzọ ga-ana anyị. Yabụ azịza nke ajụjụ a bụ ee, Laptọọpụ Lenovo dị mma… ma ọ bụrụ na anyị ahọrọghị ndị dị ọnụ ala ha na-enye.
Ụdị laptọọpụ Lenovo
Lenovo Ideapds bụ kọmputa emebere maka nkezi onye ọrụ. N'ebe a, anyị ga-ahụ kọmputa na ọnụ ala dị ala nke ga-enye anyị ohere iri nri na ọkwa onye ọrụ ma ọ bụ laptọọpụ nwere ihe ndị dị ike karị, ma na-eruteghị ihe ọkwa ndị ọzọ na-enye dị ka Legion nke e bu n'uche egwuregwu vidiyo.
Lenovo Yoga Duet 7 -…
Lenovo Yoga nwa dị ka Surface nke ika China, na-echekwa anya. Ọ gbasara ihuenyo mmetụ aka nke ahụigodo ya anyị nwere ike itinye n'ọnọdụ ọ bụla. Yoga bụ ngwakọ dị n'etiti laptọọpụ na mbadamba ihe anyị nwere ike iji rụọ ọrụ desktọpụ ọ bụla, mana na-ejikwa ngwa mkpanaka n'otu ụzọ ahụ anyị ga-esi na mbadamba.
Yoga nso bụkwa anyị dakọtara na stylus, ya mere, anyị nwere ike ise na-eji ngwa dakọtara. Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-eji kọmpụta dị ka kọmpụta Yoga n'ihi na ọ dị ha mfe imetụ ọrụ ha aka.
Usoro Lenovo Legion bụ emebere maka ndị egwuregwu. Ndị a bụ laptọọpụ nwere ihe ndị dị elu nke ga-enye anyị ohere ịkpọ aha ndị na-achọsi ike, nke gụnyere ezigbo nhazi, ọtụtụ RAM na draịvụ ike ngwa ngwa, nke na-agụnyekwa ọtụtụ nchekwa na diski ike HDD mgbe ụfọdụ. Ha na-enwekwa ụdị ihe pụrụ iche na-akpa ike karịa kọmpụta ndị ọzọ.
Chee echiche nso
The Think range bụ oke azụmahịa gbakwasara. N'ime katalọgụ ya, anyị na-ahụ ngwaahịa ThinkPad (laptọọpụ), ThinkCentre (kọmputa desktọpụ), ThinkServer (sava), ThinkStations (ebe ọrụ dị elu) na ThinkVision (nleba anya dị elu).
ThinkPads bụ laptọọpụ ịrụ ọrụ nwere njiri mara nke sitere n'igbe nri ehihie omenala ndị Japan. Ha bụ ezigbo kọmpụta, nke na ọ bụ naanị ha bụ laptọọpụ enwetara nkwado maka ojiji na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa.
Laptọọpụ Lenovo site na processor
A na-enye kọmpụta akwụkwọ ndetu Lenovo n'ọtụtụ usoro na ụdị dị iche iche site na, n'etiti ihe ndị ọzọ, processor nke na-akwado:
Ezubere ọkwa ntinye ma ọ bụ ọkwa ntinye maka ndị na-achọ ihe ndị ọzọ bụ isi na ọnụ ala. Arụmọrụ ya dị ala karịa 5 na 7, nke emebere maka mmezu nke sọftụwia na-adịghị achọ ihe, dị ka akpaaka ụlọ ọrụ, igodo, ọtụtụ mgbasa ozi, na ọbụna ụfọdụ egwuregwu na-enweghị atụ. Site n'inwe obere cores na-arụ ọrụ yana obere oge arụ ọrụ, ha nwekwara ike ime ka batrị dị ogologo.
Ọ bụ oke a na-ahụkarị, emebere ka afọ ju ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụ usoro kwesịrị ekwesị na arụmọrụ, oriri na ọnụahịa. Nke ahụ bụ, ọ ga-adị n'etiti 3 na 7. Site na ya ị nwere ike iji ụdị ngwanrọ ọ bụla, ọbụna egwuregwu vidiyo na mmemme ndị ọzọ chọrọ ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị chọghị ịma banyere oriri na ọnụahịa, ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ndị na-emepụta ihe ndị a na-enye ọrụ kachasị elu ma e jiri ya tụnyere 3 na 5. Ha nwere ọtụtụ cores na-arụ ọrụ na ugboro ole dị elu, nke na-egosi mmụba dị ukwuu na ọsọ ọsọ n'oge ahụ. ịkwaga ụdị sọftụwia niile, ọbụlagodi aha egwuregwu vidiyo AAA kachasị achọ, ma ọ bụ maka ọtụtụ mmemme ọkachamara ndị ọzọ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ Lenovo agaghị agbanye
Ọ bụrụ na laptọọpụ Lenovo agbanyeghị, anyị ga-eme ya dịka anyị na-eme laptọọpụ ọ bụla ọzọ:
Anyị na-enyocha na eriri ike adịghị n'ọnọdụ ọjọọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị na mbụ, ọ bụrụ na eriri ahụ dị njọ, kọmputa nwere ike ịchọpụta ya ma gbochie ya ịgbanye maka nchekwa.
Anyị na-ahụ na batrị dị mma. Anyị nwere batrị? Ọtụtụ oge, azịza kachasị mfe bụ nke ziri ezi. Ọ bụrụ na anyị enweghị batrị, kọmputa agaghị enwe ike zuru ezu ịgbanwuo. Ọ bụrụ na ọ nọ n'ọnọdụ adịghị mma, kọmputa nwere ike jụ ịmalite maka nchekwa. Otu ụzọ iji chọpụta na nsogbu anyị abụghị batrị bụ iwepụ ya ma gbalịa ịrụ ọrụ naanị na eriri ọkụ, ọ bụrụhaala na batrị na-agbanwe agbanwe na eriri ahụ dị mma.
Anyị na-enyocha ndị ọzọ ihe dị n’imedị ka draịvụ ike, motherboard, ma ọ bụ kaadị eserese. Mbanye ike nwere ike ime otu ihe ahụ dị ka eriri ọkụ ma ọ bụ batrị, ya bụ, kọmputa agaghị agbanye maka nchekwa. Ha agaghị abụ ikpe, mana enwere ike. Ọ bụrụ na motherboard agbanyụọ, kọmputa agaghị agbanye. Ọ bụrụ na kaadị eserese dị njọ, ihe ga-eme bụ na anyị agaghị ahụ ihe ọ bụla na ihuenyo (ma ọ bụ na anyị ga-ahụ ihe niile na-acha ọcha), ma anyị ga-ahụ ọkụ na keyboard ma ọ bụ na anyị ga-anụ ọrụ ime. Ọ bụrụ na anyị na-ahụ onwe anyị na nke ikpeazụ, anyị nwere ike imeghe laptọọpụ ma tinye okpomọkụ na kaadị ndịna-emeputa, ma nke a bụ ọrụ a na-akwadoghị maka ndị na-enweghị ihe ọmụma, nke na-ewetara anyị n'ókè ọzọ.
Anyị na-akpọga gị ọkachamara: Ọ bụrụ na ọ naghị agbanye ma anyị enweghị ihe ọmụma, ọ kacha mma ka anyị were ya na onye ọkachamara iji rụkwaa ya.
Otu esi emeghe tray CD nke laptọọpụ Lenovo
Laptọọpụ nke ọtụtụ ụdị dị na ahịa nwere atụmatụ dabara nke ọma na-enweghị ihe ndị pụrụ iche na ndị ọzọ. Nke a bụ ihe anyị na-ahụkwa na laptọọpụ Lenovo, nke mere na, ọ bụrụ na anyị eleghị ya anya, anyị agaghị ama na Mpempe akwụkwọ CD enwere. Imepe tray nke laptọọpụ Lenovo dị mfe, mana ị ga-elele anya nke ọma. Anyị ga-eme ya dị ka ndị a:
Anyị na-agbanye ya. Nke a bụ isi ihe dị mkpa: ọ bụ ezie na n'ime akwụkwọ ndetu ị ga-ahapụ naanị obere usoro, "pịa" agaghị eme ma ọ bụrụ na agbanyeghị kọmputa, ọ bụghị n'ọtụtụ ọnọdụ.
Anyị na-achọ ebe tray CD dị. Ihe na-emekarị bụ na ọ dị n'aka nri nke ahụigodo, n'akụkụ kacha nso na ihuenyo.
Anyị na-achọpụta na e nwere bọtịnụ. Ọ na-abụkarị n'etiti, dị ka onye na-anwụ anwụ, na obere na-apụta. Anyị pịa ya. N'oge a, anyị ga-enwe mmetụta "pịa" nke anyị kwuru n'elu na nke ahụ ga-ewepụ tray ahụ nanị otu centimita.
N'ikpeazụ, site n'aka, anyị na-ewepụ tray ahụ.
Ụzọ a nke ime ya ga-adịkwa irè maka ọtụtụ laptọọpụ na ahịa.
Otu esi eme ka òké aka na laptọọpụ Lenovo
Ịrụ ọrụ òké Lenovo dị mfe, mana ị ga-ama ihe ị ga-eme. Kọmputa nwere ihe dịka igodo ọrụ iri na abụọ, F12, F1, F2, wdg. Na ndabara, laptọọpụ Lenovo nwere igodo ndị a kenyere ụfọdụ ọrụ, dị ka ibuli na iwetu nchapụta, gbanyụọ ihuenyo ma ọ bụ, ihe masịrị anyị ebe a, ịgbalite na gbanyụọ òké mmetụ ahụ. Kpọmkwem igodo F ga-adịgasị iche site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ, mana n'ime ha niile anyị ga-ahụ akara ngosi ga-egosi anyị ogwe aka.
Ọ bụrụ na anyị emebeghị mgbanwe ọ bụla na nke a, ịgbalite / gbanyụọ òké kọmputa ga-adị mfe dị ka. Pịa igodo Fx na akara ngosi mmetụ aka. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ihe anyị ga-eme bụ ịchọ igodo Fn (na-adịkarị nso igodo Windows) na mgbe ahụ, na-ahapụghị ya, pịa igodo mmetụ ahụ.
Laptọọpụ Lenovo, echiche m
Lenovo bụ otu n'ime ndị na-agbakọmpụta na supercomputing giants. Akara China weghaara ngalaba ThinkPad nke IBM, yana ihe ndị ọzọ enwetara iji tinye onwe ya dị ka onye ndu. Nke a enwetala otu egwuregwu Laptọọpụ dị elu nke na-arụ ọrụ dị elu nwere ọnụ ahịa asọmpi n'ezie. Ihe kpatara o jiri bụrụ akara kacha ere n'ụwa niile.
Ụlọ ọrụ a nwere oke dị iche iche na ụdị, iji mejuo ụdị ndị ọrụ niile n'ihe gbasara ọnụahịa na uru. Site na nke dị ọnụ ala ma dị mfe, na ngwá ọrụ dị ike dị ka usoro egwuregwu Legion, site na Chromebooks, convertibles na 2 na 1. Tụkwasị na nke ahụ, ha nwere nkọwa ndị na-adọrọ mmasị, dị ka nsụgharị Windows Pro na ụfọdụ ụdị ọnụ ahịa, wdg. .
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Lenovo dị ọnụ ala
Amazon bụ ụlọ ahịa anyị kwesịrị iburu n'uche n'agbanyeghị ihe anyị chọrọ ịzụrụ. Ọ bụrụ na ihe ahụ dị ma nwee ike ibupu, ha nwere ike inwe ya, na ọnụahịa dị mma. Ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kacha mma ma na-enye ezigbo ndị ahịa ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, nke na-enye ha ohere ịmekọrịta ọnụ ahịa dị mma na ụdị. Na Amazon anyị nwere ike ịzụta laptọọpụ Lenovo (ihe nkesa mere), yana ihe ọ bụla ọzọ sitere na akara ndị China.
Ọ bụ ezie na "English" pụtara n'aha ya, ọ bụ a otu nkesa na-arụ ọrụ na Spain na Portugal, ma ika bụ Spanish. Ndị a bụ nnukwu ụlọ ahịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile nwere ọtụtụ ala, ebe anyị ga-ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, mana isi ihe kachasị ike ha bụ uwe na ngwá electronic. N'akụkụ ikpeazụ a, na mgbakwunye na telivishọn, ekwentị mkpanaaka, wdg, anyị ga-ahụ kọmputa Lenovo.
O yikarịrị ka ị nụtụla / gụọ okwu "Abụghị m onye nzuzu." Mediamarkt na-eji ụkpụrụ ahụ ma ọ na-eme ya maka ọnụ ahịa dị mma ha na-enye. Mediamarkt bụ ụlọ ọrụ German nke bụ ọkachamara na ngwa eletrọnịkị, yabụ anyị ga-ahụ kọmpụta Lenovo n'ime akụkọ ya. N'ịbụ ndị dị mkpa na mpaghara ahụ ma na-ere ọtụtụ ngwaahịa, ha nwere ike kwurịta ọnụ ahịa dị mma na ụdị ndị ahụ, nke na-asụgharị n'ime ọnụ ahịa dị ala na na anyị "abụghị ndị nzuzu" ma ọ bụrụ na anyị zụrụ n'ebe ahụ.
Carrefour na-bụ a Anya ụlọ ahịa French nke rutere n'ókèala Spen ọtụtụ iri afọ gara aga. Storeslọ ahịa Carrefour dabara na ngalaba hypermarket, nke pụtara na ha buru ibu ma nwee ihe niile anyị na-achọ. N'ime isiokwu ya, anyị ga-ahụ ma ngwaahịa nri, dị ka uwe ma ọ bụ ngwá electronic, ngalaba nke anyị ga-ahụ laptọọpụ dịka Lenovo. Na ọnụ ahịa dị mma.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Lenovo laptọọpụ